N'ogbe Home cochọ Mma Natural esi ísì ụtọ Soy Wax Cube Melts tarts ụlọ ọrụ na-emepụta | Mmeri
Delọ Mma Eke Na-esi ísì ụtọ Soy Wax Cube Melts tarts
● Emere site na soy wax soy, a wụsara tarts wax na-enye ọkụ dị ọcha ma dịkwa mfe iji. Wax melts bụ nchekwa dị nchebe na kandụl ọdịnala, n'ihi ya ị nwere ike ịnụ ụtọ isi ya.
Es Nuga ndị ahụ na-agbaze agbaze ga-eme ka ime ụlọ gị jupụta na isi ọma. Zuru oke maka ime ụlọ ihi ụra, ime ụlọ, ime ụlọ ịwụ, ọfịs, na ebe ọ bụla ọzọ chọrọ ikuku ikuku.
● anyị na-anabata nhazi, ị nwere ike iziga anyị atụmatụ gị ma ọ bụ aha gị, wen nwere ike ime ka ị buru ụzọ tụọ ma mejuo ihe ị chọrọ.
Size: 7.5cm (Ogologo) * 5.5cm (Obosara) * 2.3cm (Elu)
Eke na-esi ísì ụtọ wax cube melts blocks
Agbaze wax nke gbazee enweghị wick ma nwee ike iji ya na kpo oku.
Ihe ndị a na-agbaze wax na-adị mma ma na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ha nwee obi ụtọ, a na-eji aka wịsa wax sobbs eme ihe na-acha ọcha.
A na-agbaze soy wax melts site na iji soy wax niile na mmanụ na-esi ísì ụtọ kachasị mma. Melts zuru oke maka dorms, ọfịs ma ọ bụ ụlọ.
Gbaji ma ọ bụ na-agbaze wax wax na-ewu ewu n'ihi na ha adịghị ọnụ ma na-adaba adaba.
A na-emekarị agbaze na ogige 6, plastik clamshell mold.
Kwa cube bụ ihe dị ka 1/2 oz. ma ga-enye ma ọ dịkarịa ala awa 8.
Nwere ike ịhọrọ isi ma ọ bụ isi na-esi isi na ndepụta anyị na-esi isi, dị ka lavender 、 vanilla 、 rose 、 strawberry 、 lemon cean oké osimiri, wdg.
Ihe onwunwe Egwuregwu soy wax
Nha 7.5cm (Ogologo) * 5.5cm (Obosara) * 2.3cm (Elu)
Akara/ akara Omenala dị ka ndị ahịa chọrọ
Wax ibu ibu 70g
Oge oku 14 awa
Nke gara aga: Ji achọ chakra esi ísì ụtọ soy kandụl na kristal na ngwaahịa
Osote: Cotton kandụl Wick na Paraffin Wax ntekwasa
Cotton kandụl Wick na Paraffin Wax ntekwasa
Electroplated ọlaọcha iko kandụl na metal mkpuchi
uzo iko ite esi ísì ụtọ kandụl